Mayelana Nathi - Yantai Changyou Glass Co., Ltd.
I-Yantai Changyou Glass Co., Ltd.
I-Yantai Changyou Glass Co., Ltd inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-16 ekuhlinzekeni ngemikhiqizo yamabhodlela engilazi nezisombululo zephakeji ezihlobene.Imikhiqizo eyinhloko ihlanganisa izinhlobonhlobo zezinto zengilazi, okuhlanganisa ibhodlela lengilazi yomoya, amabhodlela ewayini, amabhodlela engilazi kabhiya, ibhodlela lesiphuzo, ibhodlela lamafutha abalulekile, amabhodlela omnqumo, amabhodlela ezimonyo, izimbiza zokudla, ibhodlela lengilazi lemithi, njll.
Imboni yethu yasungulwa ngo-2003, esesiphumelele isitifiketi se-ISO22000, isitifiketi se-UKS, kanye nesitifiketi se-SA8000 sesibopho somphakathi.Sihlomele izihlahla eziyisikwele ezingamamitha angama-75 ngobuchule baseJalimane be-SORG, amashumi emishini ye-LS kanye nemigqa emibili yokuphrinta yesikrini sikasilika esinesivinini esiphezulu engeniswe evela e-Europe.
Inkampani yethu inaka kakhulu ubuciko ngamasu okucubungula ingilazi yemodemu, futhi saziwa kabanzi futhi sethenjwa ngabakwaCoca Cola, Pepsi-cola, Diageo nezinye izinhlobo zotshwala ezidumile.Akukhona nje ukuhlinzekwa ezimakethe zasekhaya, imikhiqizo yethu yathunyelwa emazweni angaphezu kwama-30 emhlabeni jikelele.Izimakethe zethu eziyinhloko yiNyakatho Melika, iNingizimu Melika, iSoutheast Asia, Australia, Mid East, Africa, njalonjalo.
Imiklamo eyenziwe ngokwezifiso, ama-OEM kanye nama-oda we-ODM amukelwa ngokufudumele esitshalweni sethu Ubuncane obuncane boku-oda obuphansi busenza sivumelane nezimo ngokwengeziwe ekuhlangabezaneni nezimfuneko zamaklayenti ezengeziwe.Zonke lezi zinzuzo zisenza sibe umphakeli wokupakisha oyedwa.
Inzuzo yemikhiqizo yethu izinga elizinzile.Ikhwalithi iyimpilo yethu.Hhayi kuphela imishini yokulawula ikhwalithi ethuthukisiwe, sinethimba lokulawula ikhwalithi lezintonga eziyi-17.Ama-95% amalungu anesipiliyoni seminyaka engaphezu kwemi-5 embonini yethu.Uhlelo lwethu lwe-Total Production Maintain luphinde luvikele umthamo wethu wonke wokuhlinzeka.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi futhi uzokwaneliseka ngemikhiqizo yethu efanelekile kanye nenkonzo yobungcweti.
1. Iminyaka engu-18 yesipiliyoni ekukhiqizeni amabhodlela engilazi.
2. Sikunikeza ukukhetha okukodwa ngempela, ngoba sazi kahle kakhulu ngezigqoko zamabhodlela, amalebula ensimbi, amabhokisi, njll.
3. Amandla okukhiqiza angcono, ubuchwepheshe bezinga lokuqala kanye neminyaka yokuhlangenwe nakho kuzosenza sibe nezimo eziguquguqukayo kuzo zonke izici kunezinye izimo.
4. Ikhwalithi efanayo, engabizi kakhulu.Ukusebenzisa ubuchwepheshe obuphambili kakhulu bokukhiqiza amabhodlela alula, ngaphansi kwesisekelo sokuqinisekisa ikhwalithi yamabhodlela, ukunciphisa kakhulu izindleko, okwenza amabhodlela ethu ancintisane kakhulu emakethe.E-China, azikho izimboni zengilazi ezingaphezu kwezingu-3 ezinobuchwepheshe bebhodlela elingasindi.Siphakathi kwabangcono kakhulu.
5. Ifilosofi yethu: Amakhasimende ahlala elungile, ikhwalithi nedumela kubaluleke kakhulu kunenzuzo.Wonke umsebenzi wethu uwukubambisana kwesikhathi eside sokuwina-win namakhasimende, hhayi nje ubudlelwano bokuthengisa.
6.Isevisi yethu yangemuva kokuthengisa: Izinga lokuphasa lemikhiqizo yethu selifinyelele ku-99.98%.Sizoqhubeka nokuthuthukisa ikhwalithi yemikhiqizo yethu.Uma kunenkinga ngeke sikhethe ukuphunyula njengamanye amafemu.Kunalokho, sizomisa iqembu lochwepheshe ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuze siphakamise izixazululo nezinhlelo zesinxephezelo zezinkinga eziphakamayo.Sizoba nesibopho ngemikhiqizo yethu.